Ukufa ▷ ➡️ Discover Online Online ➡️
1 Kufundwa iMin
Susa okudala ukuze wenze indawo entsha.
Okushiwo yikhadi le-tarot «Ukufa»
Incwadi yokufa ayisho ngokufa komuntu uqobo. Ngiyakwazi amele ukufa kokunye okuthile, njengephrojekthi, uhlelo, noma ubudlelwane. Leli khadi libuye libe nesikhathi sokuvuna, esifanekiselwa kumbozo wakudala ngumthambo wokuvuna.
Uma izithelo zasehlobo zingavuni, ziyalahleka ebusika obunobunzima, abantu bangadli. Njengoba isiskeli sisika izintambo ezisibophela okwedlule, kuyasikhulula ukuthi siqhubekele phambili ngaphandle kokwesaba, ngoba akukho esingakulahla. Konke okuthengelwayo kuvuselelwa ngenjongo yokuzala kwesikhathi esizayo, ngakho-ke akukho okulahlekile ngempela, ngaphandle kwemijikelezo yesikhathi yenzuzo nelahleko.
Kusezingeni eliphezulu kakhulu leTarot, sibona uKufa egibele ihhashi futhi egqoke izikhali ezimnyama. Ukugcizelelwa kwalezimbozo usejezisweni lwesono, njengendlela esetshenziswe ngayo ukuchaza isithombe se-medieval P isifo (okwasuselwa kuyo umfanekiso wokufa) ulaka lukankulunkulu. Ngenhlanhla, ezikhathini zanamuhla, asigcwele ifilosofi enecala enjalo.
Zikhulule kokudlule okungasasebenzi kahle futhi uqhubekele esikhathini esizayo.
Phakamisa inkambo yesenzo ezokwenza uvumelanise lokho okufunayo nalokho okungenzeka manje.
Incwadi yokufa iyakuyala ukuthi wehlukane ne-oda yakudala. Ungafuna ukuvala ama-akhawunti, uqedele imisebenzi engakaqediwe, futhi uqoqe isivuno sakho. Isikhathi sokuqhubeka. Uma usika izintambo ezikubophezele emasikweni amadala nasemihlanganweni emidala, ungazikhulula ukuze uhlanganyele nokugcwala kokukhanya okungenayo. Lesi akusona izaba zokwenqaba abanye noma ukubalimaza nganoma iyiphi indlela. Kumane kuyisikhathi sokuqhubela phambili izintshisekelo zakho zokugcina.
Ungavumeli ukungabi nalutho nokwethembeka okuphelelwe amandla kukuyekise. Zimisele ukwenza noma yini edingekayo ukuze ufike lapho ufuna ngempela ukuba khona.